आफ्ना चेलीको वास्ता छैन, विदेशीको चिन्ता लिएर बस्ने ? नागरिकतामा विगतको गल्ती सच्यायौं’ - Himali Patrika
आफ्ना चेलीको वास्ता छैन, विदेशीको चिन्ता लिएर बस्ने ? नागरिकतामा विगतको गल्ती सच्यायौं’
हिमाली पत्रिका १० असार २०७७, 12:12 pm
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी नेतृ पम्फा भुसालले महिला अधिकारका लागि विभिन्न मोर्चाबाट संघर्ष गरिन् । चार दशकभन्दा लामो राजनीतिक इतिहास बोकेकी उनलाई अहिले एकथरिले ‘महिला विरोधी’ को आरोप लगाउन थालेका छन् ।